COVID-19 manohy gaga: tsy vaksin bala ny bala
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » COVID-19 manohy gaga: tsy vaksin bala ny bala
Richard Maslen avy amin'ny CAPA - Center for Aviation, dia nanao fampisehoana mivantana mifantoka amin'ny sehatry ny fiaramanidina any Moyen Orient sy Afrika.
Tahaka ny fahatongavan'ilay valanaretina coronavirus tsy nisy fampitandremana kely akory, ny ADN niova miaraka amin'ny fihenan'ny mutation, dia mampiseho fa afaka manohy gaga antsika izy io.
Miaraka amin'ny sisintany mikatona mahomby sy voafetra ny dia lavitra, dia midika izany fa ny sidina iraisam-pirenena dia mbola voafetra ihany.
Nampitandrina ny CAPA fa tsy ho bala volafotsy ny fahatongavan'ireo vaksiny.
Ny lahatenin'i Richard Maslen dia mijery ireo fivoarana vao haingana manerana ny faritra ary mijery amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny tsena manokana isaky ny misy. Tamin'ity volana ity, ny fifantohana dia any Koety sy Nizeria ary ny antony mahatonga ny vaksinin'ny COVID-19 tsy bala volafotsy. Nanomboka i Richard:
Taorian'ny nidirantsika tamin'ny taona tamin'ny fomba fijery be fanantenana indrindra efa hitantsika nandritra ny volana maro, ny zava-misy tao anatin'ny roa volana lasa dia nampahatsiahy antsika fa tsy misy azo atao ambanin-javatra. Tahaka ny fahatongavan'ilay valanaretina coronavirus tsy nisy fampitandremana kely akory, ny ADN niova miaraka amin'ny fihenan'ny mutation, dia manasongadina fa na dia mino aza isika fa mety hahazo fahatakarana momba ilay virus mahafaty, afaka manohy hahagaga antsika izany. Any amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, ny onjampeo vaovao dia midika fa rehefa nahazo fahalalahana vetivety ianao dia nisy lalàna hentitra kokoa noraisina izay mametra ny fivezivezena.
Rehefa voafidy tsara ny sisintany ary voafetra ny dia tsy ilaina dia midika izany fa ny sidina iraisam-pirenena dia mbola voafetra ihany. Saingy, tena gaga ve isika?
eto ao amin'ny CAPA Nampitandrina izahay fa tsy ho bala volafotsy ny fahatongavan'ireo vaksiny. Azo antoka fa maneho dingana lehibe mankany amin'ny tontolon'ny post-COVID vaovao io, saingy mbola mijanona kely lavitra ihany izany. Ny tantara tsara tao amin'ny ranomasina misy vaovao ratsy dia toy ny oasis nosy efitra ary namitaka anay hanana fiainana tsara. Hatao izany, saingy ny zava-misy dia ny hijanona maharitra sy amin'izao fotoana izao ny zavatra dia mety ho henjana kokoa noho ny hatramin'izay ho an'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eran-tany sy ireo sehatry ny orinasa maro izay ananany andraikitra lehibe manohana. Ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ankehitriny dia nandefa ny asany tamin'ny ambaratonga sasany, saingy mijanona amin'ny ambaratonga ambany lavitra noho ireo hita talohan'ny krizy ara-pahasalamam-bahoaka ireo. Ny fameperana ny fivezivezena mba hialana amin'ny fitohizan'ny COVID-19 sy ny onjam-panafody dia mitohy manelingelina ny fanarenana iraisampirenena, na dia efa hita aza fa nisy ny fahombiazan'ny dia an-trano.
Ny Moyen Orient dia misy fiantraikany manokana amin'ny fameperana fitsangatsanganana iraisampirenena misy ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra niely nanerana an'izao tontolo izao ary miankina amin'ny mpandeha iraisam-pirenena.